Citi Field - Toeram-ponenan'ny New York Mets
Any Queens, ny Citi Field dia mora azo avy any Manhattan ary mipetraka ao amin'ny ekipa baseball an'ny New York Mets. Nanokatra ny taona 2009 ny Citi Field, nanolo ny tranon'ny taloha tao Mets - Shea Stadium.
Ny Jackie Robinson Rotunda, Hodges sy Stengel dia misokatra 2 ora ora alohan'ny fialan-tsasatra ho an'ny mpitsidika izay te-hijery ny fomba fitokonana. Ny fidirana rehetra hafa dia misokatra 1 1/2 ora alohan'ny lalao.
Mankanesa aloha mba hisorohana ny fahantrana mandalo amin'ny fiarovana Citi Field. Ity misy Saritanin'i Citifield izay manasongadina ny mpizahatany, ny tombontsoa, ​​ny varotra ary ny serivisy ao Citifield. Mila mivezivezy eny amin'ny sehatra isan-tsokajiny ianao mba hijery ny sari-tany ho an'io faritra io.
Ny sigara dia voarara amin'ny kianja, afa-tsy amin'ireo toerana ireo:
Toerana Plaza - Fiafara eo ankavia
Tafio-drivotra - Fivarotana an-dàlambe afovoan-dalana midina avy any ambadiky ny lahatsary CitiVision
Fivarotan-tsarimihetsika - Ny tampon'ny fiampitana avy amin'ny fizarana 527
Ny coolers, ny tavoahangy ary ny plastika plastika, ary ny boaty, ary ny sobika lehibe kokoa noho ny kitapo na kitapo ankizy dia tsy zakany. Raha te-hitondra sakafo sy zava-pisotro ho anao ianao, tadidio ao an-tsaina ireo politika ireo - boka juice no manolotra vahaolana tsara (azo atao ihany koa ny dite dite, sns) ary manamboatra sns kely vitsivitsy ao an-kitapo ankizy safidy. Raha mitondra zavatra izay voarara ianao dia tsy maintsy mamerina izany amin'ny fiaranao alohan'ny hidirana ao amin'ny kianja.
Ny fitsipi-pifehezana dia mandràra ny fisotroana alikaola sy ny fisokafana (anisan'izany ny akohokely), ary koa ny mpandeha an-tongotra sy ny fifamoivoizana.
Azonao atao ny manadihady ny Citi Field Fan Map alohan'ny handehananao any Citi Field. Tena asa goavana ny fanasongadinana ny fankasitrahan'ny Citi Field, sy ireo safidy maro ho an'ny sakafo ao Citi Field.
Aiza no hisakafo any Citifield
Citifield, tranon'ny New York Mets, dia manana konsily, trano fisakafoanana ary trano fisotroana izay ahafahanao mihinana amin'ny andro amin'ny lalao.
Ny alikadin'i Nathan, alikaola ary alika katsaka nandritra ny valan-javaboary
Shake Shake - burger lehibe, alika mafana ary mozika mangatsiaka
Blue Smoke - nisintona kisoa sy taolam-paty nanompo tany amin'ny toerana roa
Mama's of Corona - hereta sy tsindrin-tsakafo Italiana
Safidy bebe kokoa: Fiarahabana Citifield ao amin'ny Map Fan Fan Citifield
Ny klioban'ny Citifield dia manolotra safidy ho an'ny mpankafy. Ny fidirana amin'ny klioba sy ny trano fisakafoanana dia voafetra amin'ny tompon'ny toerana manokana, koa jereo ny antsipiriany ao amin'ny tranonkalany.
Delta Sky360 Club - any ambadiky ny takelaka misy ny trano, ny Delta Sky360 Club dia misokatra ho an'ireo tompon-delta Delta Club Platinum sy Gold ary manolotra zava-pisotro sy sns. Misy trano fisakafoanana tsara, bara anankiroa ary trano fisakafoanana maivana.
Champions Club - miaraka amin'ny toerana roa, iray ao ambadiky ny fototra voalohany, ny iray ao ambadik'ireo toeram-pivarotana fahatelo, ireo trano fisakafoan'i Citifield tsirairay dia manana sary sy fahatsiarovana avy amin'ny ekipa mpilalao ekipa NY Mets 1969 sy 1986.
Acela Club - famandrihan-toerana dia atolotra amin'ity toeram-pisakafoanana tsara indrindra avy amin'i Drew Nieporent avy amin'ny Tribeca Grill sy Nobu famehezana.
Caesar Club - Cafe Rome manolotra mpitsidika fanatanjahan-tena tsy tapaka, ary koa baoritra feno, satroka ary fahitalavitra fahitalavitra.
Club Promenade - Misy trano fisakafoanana fisakafoanana sy baria roa no misy ao ambadiky ny trano misy ny mariazy.
Citifield dia miorina ao Flushing, Queens. Azo aleha avy any Manhattan ny fitateram-bahoaka. Adiresy: Roosevelt Avenue. Flushing, NY 11368-1699.
Subway à Citifield: Raiso ny 7 ny Mets-Willets Point. Fotoana 30 minitra ny dia.
LIRR (Long Island Railroad) mankany Citifield: Raiso ny LIRR any amin'ny station Mets-Willets Point avy ao amin'ny Penn Station . Fotoana 30 minitra ny dia.
Ny fiara fitaterana mankany Citifield: Ny Citi Field dia manakaiky ny Grand Central Parkway, ny Long Island Expressway ary ny Whitestone Expressway.
Fehiny: Fomba fitaterana an-dalambe feno mankany amin'ny Citi Field
Fitarihana fitarihana: Torolalana fitarihana avy ao amin'ny NY, NJ, CT ary ny faritany dimy.
Fiarabe mankany Citi Field
Ny New York Water Taxi dia manome tolotra maimaim-poana ho an'ny Citi Field noho ny Delta Airlines. Mila miverina amin'ny alalan'ny metro ianao, satria ny tolotrasa ihany no atolotra ho an'ny lalao.
Ny Sea Streak dia manome fiara fitaterana an-tariby ho an'ny Citi Field ho an'ny lalao trano fialantsasatra amin'ny herinandro ao New Jersey.
Ireo zavatra hijerena ny saha Citi
2KSports FanFest - Manomboka 2.5 ora mialoha ny lalao mandritra ny lalao faha 7, 2KSports FanFest manasongadina DJ, dunk tank, matihanina cages ary mety hahita an'i Mr. Met aloha talohan'ny lalao.
Mets Hall of fame sy tranom-bakoka - Misy endri-panehoan-kevitra mampifandray, ary koa ny Trophées sy ny peratra World Series, ary ny takelaka ho an'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny Hall of Fame.
New York Mets Official Website: http://newyork.mets.mlb.com
Ny horonan-tsary ivelan'ny Coney any ivelany - MONDAY Flicks on the Beach
Ny tantaran'i NYC: Ny korontana mahery vaika
Ny Sabotsy voalohany tao amin'ny Mozean'i Brooklyn: Inona no atao?
Aiza no hanomezana boky vaovao ampiasaina any Brooklyn
Foibem-pitaterana an-dalamby tao NYC: Oktobra Listings
Famangiana ny zaridaina Flower Carlsbad
Fikarohana ny firaketana Amerikana tsara indrindra sy indianina
7 Fahagagana, mahatsikaiky ary mozika any Paris
Ireo lalan-dalavan'i Scenic dia manao fanadinam-panadinana tsy hay hadinoina
Sakafo Veganina sy Vegan any Auckland, Nouvelle Zélande
Chandler, Arizona Profile sy Tantara
Toeram-pambolena sy fiompiana rano ao St. Louis
Toeram-pivoahana vaovao fanitso
Ny Fair Fair State any Mexico: A Guide Complete
Travelex: The Complete Guide
Kanada amin'ny volana novambra ho an'ny mpizaha tany sy ny mpitsidika